15% Shandisa Social Media Kuti Uwane Mabhizinesi Emuno | Martech Zone
Muvhuro, April 29, 2013 Muvhuro, April 29, 2013 Douglas Karr
Waiziva here 15 muzana yevatengi vanoshandisa masocial network nzvimbo dzekutsvaga mabhizinesi emuno? Makambani akawandisa ari kurasikirwa nemukana wekuvandudza nharaunda yavo mukati mezvenhau, zvichibatsira kusimudzira masimba avo nekuziva mukati memanetwork evanhu vanofarira zvigadzirwa nemasevhisi avo. Kunyangwe avo vanoziva mukana uyu vachiri kunetseka kuuita, zvakadaro.
Takakurukura Balihoo yemuno kushambadzira otomatiki maturusi pane iyo blog pamberi. Ivo vachangobva kuburitsa iyi infographic ne pasocial media chokwadi bhizinesi rega rega rinofanirwa kuziva.
Tags: Balihooyemunharaunda kushambadzira michinalocal searchyemunharaunda yekutsvaga kushambadzira otomatikipasocial media chokwadi
Mhinduro Inotangisa Inopindirana Inofarira
Apr 30, 2013 pa 10: 30 AM
Iri infographic zita rinoshaikwa izwi rekuti "Chete". Mushure mezvose nekuenzanisa 11% yevatengi vachiri kushandisa anodhinda yeyero mapeji. Zvemagariro midhiya haisi hotbed yekutsvaga kwemuno (zvirinani, zvisati zvaitika).